I-Calluna Cottage, i-Aviemore -umbono omangalisayo nendawo
I-Calluna Cottage iyindlwana yokuziphakela ekhanyayo, yesimanjemanje evalekile esemgwaqweni othule ongadluli eduze kakhulu nenkaba ye-Aviemore. Kukhona ikamelo lokulala elingu-1 elinombhede olingana nenkosi kanye negumbi lokugezela elingu-1, elilala abangafika kwabangu-2. Kunengadi ebiyelwe ngokuphelele, ishede lokugcina elivikelekile, i-BBQ nokubukwa okumangalisayo! I-Calluna Cottage nayo inobungani bezinja.
I-Calluna Cottage iyindlwana yokuziphakela ekhanyayo, yesimanjemanje evalekile esemgwaqweni othule ongadluli eduze kakhulu nenkaba ye-Aviemore. Kukhona ikamelo lokulala elingu-1 elinombhede olingana nenkosi kanye negumbi lokugezela elingu-1, elilala abangafika kwabangu-2. Kunendlu yokugezela yomndeni eneshawa phezu kokugeza. Isitimela sethawula esishisayo endlini yokugezela. Ikotishi lethulwe kahle, nakho konke ukunethezeka kwesimanje okudingayo ukuze ube neholide elilula lokuziphekela e-Aviemore. Kukhona indawo yokuhlala / yokudlela, ikhishi lesimanje elifakwe kahle elinefriji, umshini wokuwasha izitsha / umshini wokomisa, kanye negumbi lokulala elilodwa elilingana kahle. Inengadi ngemuva enombono omangalisayo weCairngorm Mountain, ishede lokugcina elivikelekile, i-BBQ netafula lepikiniki nezihlalo.
I-Calluna Cottage isendaweni ethule kakhulu futhi isendaweni encane ye-de-sac ngakho akukho zimoto ezidlulayo. Kuyindawo enhle enokuthula, nokho uhambo olufushane nje lokungena edolobhaneni lase-Aviemore eduze nomgwaqo wezinyawo noma imizuzu emi-5 yokushayela. Kusuka endlini encane, kunokubukwa okuhle kweCairngorm Mountain Range. Futhi, ukusuka emnyango, ungakwazi ukuhlola indawo ngebhayisikili noma ngezinyawo futhi ngaphakathi kwebanga elifushane usehlane elihle le-Cairngorms National Park. Ikotishi liphinde libe seSpeyside Way, okungenye yezindlela ezi-4 eziphambili zaseScotland.
I-Aviemore village iyidolobha elincane, elinobungani elinezinhlobonhlobo ezinhle zamakhefi, amabha, izindawo zokudlela nezitolo. Izitolo ezihlinzeka ngempahla yangaphandle nokuqashwa kwemishini zitholakala kalula. Kukhona ne-swimming pool, indawo yokudlala yasendlini, nesinema yemisebenzi yasendlini. Kunenqwaba yezifundo zegalofu ezinhle kakhulu esifundeni futhi ubuqhawe be-Spey Valley Golf Course buhamba ibangana nje. Ngokuqhubekayo kunezindawo eziningi ongazihlola, kodwa uzothola inala yemisebenzi yayo yonke iminyaka namakhono kusukela emnyango.
Sihlala eduzane futhi sizoba khona uma udinga okuthile noma singasiza. Yonke imininingwane yethu yokuxhumana iku-cottage uma udinga ukuxhumana.